Luis Suarez oo la guddoonsiiyay Kobta Dahabka (Golden Boot) ee dhaliyihii ugu goolasha badnaa 2015 – Gool FM
Luis Suarez oo la guddoonsiiyay Kobta Dahabka (Golden Boot) ee dhaliyihii ugu goolasha badnaa 2015
Haaruun October 20, 2016
(Barcelona), 20 Okt 2016 –Weeraryahanka kooxda Barcelona ee Waddanka Spain Luis Suarez ayaa la guddoonsiiyay abaalmarinta Kobta Dahabka ah ‘the Golden Boot’ ee dhaliyihii ugu goolasha badnaa Qaaradda Yurub xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
Waa Markii 2-aad ee ciyaaryahan Suarez uu qaato Kobta Dahabka ah isagoo xilli ciyaareedkii 2013/14 xilligii uu joogay Liverpool-na ku guuleystay Kobtiisii Dahabka ahayd ee ugu horreysay.
Dhaliyaha Uruguay oo ka hadlayay xafladdii lagu siiyay Kobta Dahabka ayaa waxa uu yiri “Waxaan u mahad celinayaa Barcelona oo i siisay fursadda aan halkan ku joogo, taasoo ii suuro gelisay inaan ka dhabeeyo riyadeyda, waxaan u mahad celinayaa saaxiibadeyda aan isku kooxda nahay kuwaas oo ka qayb qaatay dhammaan goolashii iyo horumarkii aan gaaray, iyaga ayaana inta badan sabab u ah”.
“Xilligii aan joogay Ajax waxay ahayd billoow, waxaan la kulmay ciyartooy European ah, waxayna ahayd xilli aan nasiib lahaa waayo waxaan dhaliyay goolal badan, taas oo fursad ii siisay inaan ku biiro Liverpool, waxaan iyana u dhaliyay goolal fara badan, balse kuma guuleysan Horyaalka Ingiriiska taas oo ahayd riyadeyda, kaddib Barcelona ayaan imid waana halka ay kugu hareeraysan yihiin ciyaartooydan wax walba fudeydka kaaga dhigaya” ayuu yiri Suarez.
Ciyaaryahan Suarez ayaa xilli ciyaareedkii hore dhaliyay 40 gool isagoo sidaasi ku noqday dhaliyihii ugu goolasha badnaa dhammaan dhaliyeyaasha Horyaallada kala duwan ee Qaaradda Yurub.
Suarez oo maanta markiisii 2-aad ku guuleystay Kobta Dahabka ah
Suarez iyo carruurtiisa
Suarez iyo Qoyskiisa
Gerard Pique iyo Jordi Alba oo la ogaaday muddada ay garoomada ka maqnaan doonaan
Lothar Matthaus; "Bayer Munich way ku qaldanayd inay fasaxdo Kroos waxay ahayd inay mushaarka u kordhiyaan"